I-ESRI MapMachine, iimephu ze-thematic online - Geofumed
NgoNovemba, 2007 ArcGIS-ESRI, Iiphotography, Google umhlaba / imephu
MapMachine Yinkonzo ezinikezelwa ESRI National Geographics, apho unako ukubonisa iimephu weendawo evela ehlabathini lonke.
Imephu yaseVenezuela, ukusasazwa kwabantu
Ukusebenzisana, kunye nokusebenza. Phakathi kwezinye iindlela ezingaboniswa:
ubungozi kunye nobungozi
Eyona ndlela ingcono kakhulu ... kwaye ilula.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Atlas yamaphupha emfundo ... mahhala
Post Next Iiplatifti ze-GIS, ezisebenzisayo?Okulandelayo "
Iimpendulo ze-6 "I-ESRI MapMachine, iimephu ze-thematic online"
Assalomu aleykum, amadoda uFani geografiya o'qituvchisiman, manashu ArsGIS Dasturi programmasini qanday skachat qilsam bo'ladi, pullik bo'lsaxam yaxshi bo'lardi.
Ukuba kukho, khangela i-Tuent ukubona ukuba ihlangabezana nezilindelo ozenzayo.
Henry Herrera uthi:
Hi kwemini elungileyo, ukuba mna ulwazi geo-ekhonjwe kunye iinkcukacha oMbhaxa, umz. Mexico ukubulala nguMasipala ufuna ukwenza imaphu weendawo, kukho i-inthanethi ekhuselekileyo kakuhle ukuba mna ukulayisha data kwaye ufumane ehambelana imaphu weendawo?
IVenesuela ngutata olungileyo kwaye eyona nto ilunge kakhulu. Bendifuna ulwazi oluthe kratya kodwa andilifumananga. Ngaphandle koko, imephu intle kakhulu, kodwa bendiyidinga imephu yentsingiselo yeVenezuela, kodwa kunjalo, enkosi ndwendwela eVenezuela kwaye uza kubona ukuba utata undithanda kakhulu, Ewe, zilungiselele kakuhle.
Ndiyaphila sarahi phatha uzokubona kungekudala.
I-Venzuela iyona nto ibhetele
lihle kakhulu iphepha kodwa njengoko ndifumana iimephu ezicacileyo zeVenezuela